कांग्रेसको काम "दिनभर बीपी, रातभर विप्लव ?" - Sabaithari.com
कांग्रेसको काम “दिनभर बीपी, रातभर विप्लव ?”
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्‍चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको छ।
बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले कांग्रेससँग विप्लव समूहबारे पार्टीको स्पस्ट धारणा राख्न माग गर्नुभएको हो । उहाँले प्रश्‍न गर्नुभयो , ” हिंसाप्रति कांग्रेसको धारणा के हो ? दिनभर बीपी, रातभर विप्लव ? चार तारामा शान्ति र लोकतन्त्रका तारा कता हराए ?”
मन्त्री बास्कोटाले चन्द समूहले गरिरहेको हिंसाको सहारा लिएर नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो । संविधान, कानुन र शान्तिकाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले चन्द समूहलाई किन काखी च्यापेको भनि प्रश्न पनि गर्नुभयो ।
भोजपुरमा चन्द समूह र प्रहरीबीचको झडपमा परी बुधबार बिहान दुवै पक्षका दुई जनाको हत्या भएको थियो । सोही घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई ‘मृत्युको व्यापार’ गरिरहेको आरोप लगाएको थियो । त्यसप्रति टिप्पणी गर्दै मन्त्री बास्कोटाले नेपाली कांग्रेसले कानुन, संविधानविपरित हिंसात्मक गतिविधिलाई साथ दिएको दाबी गर्दै आपत्ति जनाउनुभयो । चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्याको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नहुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सो हत्याकाण्डको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसद बैठक अवरोध गरिरहेको छ ।